Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo rajaynaya midnimada Soomaaliya - Sabahionline.com
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo rajaynaya midnimada Soomaaliya
Wasiirka Arrimaha Gudaha Dawladda Federaalka Ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya Cabdisalaam Macallin Maxamuud ayaa hadal uu dadka u jeediyay Axaddii (10-kii June) waxa uu ballan-qaaday in nabaddii ay ku soo noqon doonto Soomaaliya, sidaana waxa ku warramay Shabakadda Wararka Shabeelle.
Dawladda Soomaaliya oo ballan qaadday in ay al-Shabaab ka takhallusi doonto
Dawladda Soomaaliya oo kordhinaysa ammaanka Muqdisho ka dib markii ay al-Shabaab ay hanjabtay
1,000 askari oo cusub oo loo diyaariyay sugidda ammaanka Muqdisho
Isaga oo ka hadlaya xaflad ka dhacday degmada Howl-wadaag ee Muqdisho, ayuu Maxamuud waxa uu sheegay in la meel-dhigay qorshe lagu horumarinayo nabadda, sharciga iyo kala dambaynta magalaada.
“Waxan ku boorrinayaa dadka reer Muqdisho in ay iskaashadaan oo ay gacan siiyaan ciidamada ammaanka dawladda Soomaaliyeed si ay markaa u hanato ammaanka guud ee magaalada, isla markaana ay uga hortagto weerarrada lagu hayo dadka rayidka ah,” ayuu yiri.
Bishii hore, qaraxyo dhowr ah oo ka dhacay caasimadda ayaa dilay ugu yaraan todoba qof, oo u badan askar. Todobaadkii horena, rag hubaysan ayaa dilay nin ganacsade ah oo u dhashay dalka Turkiga.
Magaalada Muqdisho ayaa waxa maamulkeeda gacanta ku hayay Dawladda Federaalka Ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya tan iyo markii al-Shabaab laga saaray Muqdisho bishii August 2011-kii.
June 12, 2012 @ 01:28:30PM
Aad ayaad u mahadsantihiin ciidamada AMISOM (ee ka socda ururka AU da), waxanad ku mahadsantihiin hawsha aad qabateen, soomaaliyana 20 sano kadib nabad ayay kusoo noqon doontaa, waxaanad dhab ahaantii arrinkaa ku mutaysateen amaan. Ha noolaato AMISOM, ha noolaado ururka AU da ee midawga afrika. Anigu dhankayga ma rabo in wada hadal nabadeed lala galo kooxda alshabaab, sababtoo ah markay arkeen in la jabiyay, ayay rabaan in wada hadal lala galo, arrinkaasi waa maya, AMISOM na waa inay alshabaab edbintooda halkaa kasii wadaan, oo aysan wax naxariis ah u galin.